Somalia oo loogu deeqay lacag looga Hortagayo Xad-gudubyada Haweenka |
Somalia oo loogu deeqay lacag looga Hortagayo Xad-gudubyada Haweenka
Sabti, June 14, 2014 (HOL) — Dowladda Imaaraadka Carabta oo kamid ahayd wadamadii lagu casuumay shirkii tacadiyadda haweenka ee lagu soo gaba-gabeeyay London ayaa lacag gaaraysa $1.5 Milyan ugu deeqday Somaliya oo kamid ah goobaha dumarka lagu dhibaateeyo sida laga sheegay shirka.
“Aad ayaan ula dhacsanahay go’aanka dowladda Somalia ee lagu cirib-tiriyo danbigan aadka u liita,“ ayay tiri Reem Al Hashimy oo hogaminaysay wafdigii ka socday Imaradka ,waxaana ay xustay in ay si dhow ula shaqayn doonaan cid kasta oo ka hortagaysa tacaddiyada dumarka loo gaysto.
Wasiiradda ayaa sheegtay in hal Milyan oo dheeri ah ay ku dari doonaan lacagaha kale ee loogu yaboohay Soomaaliy si loogu taageero barnaamijyada Qaramada Midoobay ay ka waddo qaybo kamid ah dalka.
“Dowladdeena waa ay ku faanaysa in ay qayb ka tahay dadaallada hadda socda, waana si wadi doonaa si aan taageero ugu muujino Soomaaliya,“ ayay mar kale tiri Al Hashimy oo tilmaamay in dowladda hadda jirta looga baahanyahay masuuliyad dheeri ah.
In ka badan 1,200 oo xubnood oo wadamo kala duwan oo adduunka ah ka socday ayaa soo xaadiray shirkan oo socday muddo afar maalmood ah, kaasoo ay marti-galisay dowladda Ingriiska ,isla markaana diiradda lagu saarayay soo afjaridda dhibaatoyinka loo gaysto dumarka.
Ugu dambeyn xog-hayaha arimaha dibadda England William Hague iyo Angelina Jolie oo Qaramada Midoobay u matalaysay shirkan ayaa si wada jir ah goobta uga sheegay in la ciqaabi doono cid kasta oo lagu helo danbiyada kufsiga oo intooda badan ka dhaca wadamada ay colaaduhu ka jiraan.